Fanambarana ofisialy nataon'ny Okrainiana Airlines momba ny fianjerana tany Tehran
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Fanambarana ofisialy nataon'ny Okrainiana Airlines momba ny fianjerana tany Tehran
Androany, amin'ny 08 Janoary 2020, «Ukraine International Airlines”Fiaramanidina mandritra ny asany Ny sidina PS752 avy any Tehran mankany Kyiv dia nanjavona tao amin'ny radara minitra vitsy aorian'ny fiaingan'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Tehran.
Niala tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Tehran tamin'ny 06 10:XNUMX. Iran ora eo an-toerana.
Raha ny angom-baovao mialoha dia nahatratra 167 ny mpandeha ary 9 ny ekipa tao anatiny. Ny solontenan'ny UIA amin'izao fotoana izao dia manazava ny isan'ny mpandeha ao anatiny.
Ny lisitr'ireo mpandeha dia hapetraka ao amin'ny tranonkalan'ny kaompaniam-pitaterana aorinan'ny fanamafisana farany ny fisian'izy ireo ao anaty sambo.
Ny kompaniam-pitaterana dia maneho ny fiaraha-miory amin'ny fianakavian'ireo niharan'io fianjerana io ary hanao izay rehetra azo atao mba hanohanana ireo havan'ireo niharam-boina. Miantraika haingana, UIA dia nanapa-kevitra ny hampiato ny sidina mankany Tehran mandra-piandry ny fotoana manaraka.
Toy ny tamin'ny 09 ora sy sasany, UIA amin'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ireo manampahefana fiaramanidina, dia mandray ny fepetra rehetra hamaritana ny anton'ny lozam-pifamoivoizana. Mifanindran-dàlana amin'izany, ny zotram-piaramanidina dia hifandray amin'ireo havan'ireo mpandeha, hanome izay mety ho fanampiana amin'ny toe-javatra ankehitriny.
Ny sidina dia niasa tamin'ny fiaramanidina Boeing 737-800 NG (fisoratana anarana UR-PSR). Ny fiaramanidina dia natsangana tamin'ny taona 2016 ary natolotra mivantana tamin'ny zotram-piaramanidina avy amin'ny mpanamboatra. Ny fikarakarana farany ny fiaramanidina dia natao tamin'ny 06 Janoary, 2020.
Raha mila fampahalalana momba ireo mpandeha izay tao anatin'ny sidina PS752, mifandraisa amin'i Ukraine International Airline amin'ny alàlan'ny telefaona: (0-800-601-527) - maimaim-poana ny telefaona ho an'ny antso rehetra ao Okraina na ho an'ny antso iraisam-pirenena (+ 38-044-581-50- 19).
Hisy fanazavan-kevitra ho an'ny solontenan'ny haino aman-jery.
Toerana: Efitrano fihaonamben'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Boryspil.
Fotoana: 08 Janoary, 2020 amin'ny 10:00 ora.
Toerana fihaonana ho an'ny mpanao gazety - Birao Fampahalalana, Terminal D, faritra fidirana amin'ny sidina iraisam-pirenena.
Hatao ny fanadihadiana miaraka amin'ny fandraisan'andraikitry ny manampahefana fiaramanidina ao Ukraine, Iran, ny solontenan'ny mpanamboatra Boeing, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, ary ny National Bureau of Air Accident Investigation of Ukraine. Ny zotram-pitaterana dia hampahafantatra ny fizotry ny fanadihadiana sy ny antony nahatonga ilay tranga mampalahelo raha vantany vao fantatra izy ireo.
Misokatra indray izao ny fizahantany any Puerto Rico
Manafina zavatra? Nandà ny hamoaka ny boaty mainty nianjera tamin'ny fiaramanidina Okrainiana i Iran